Iindaba - Abathengisi bentsimbi kunye nabangaphakathi kumzi-mveliso baqikelela ukuba intengiso yentsimbi iya kunyuka kungekudala
Abathengisi bensimbi kunye nabangaphakathi kwishishini baqikelela ukuba imakethi yentsimbi iya kunyuka kungekudala
Usuku lukaZwelonke emva kokuba ibango lesinyithi lomelele, intengiso yentsimbi kulindeleke ukuba inyuke kungekudala.
Ngokutsho kwabathengisi bensimbi kunye nabangaphakathi kwishishini. Ibha yangoku, iikhoyili eshushu eshushu. Ikhoyili eqengqelekileyo ebandayo kunye nepleyiti engqindilili kunye nezinye iintlobo ezithile zeendlela ezahlukeneyo.
Malunga nezinto zebar, ngexesha loSuku lweSizwe, ibango kwingingqi yeBeijing-Tianjin-Hebei yayingaphantsi, kwaye emva koSuku lweSizwe, ibango laqala ukwanda. Ingeniso yemihla ngemihla inyuka ngokuthe ngcembe, ngakumbi kwi-25 mm yemfuno yokubuyisa inyuke kakhulu. Nge-Okthobha ye-16, Imakethi yaseBeijing yemveliso yentsimbi yaseChenggang ye-25 mm yexabiso lokubuyisela ixabiso le-3700 yuan / ton. Xa kuthelekiswa no-Okthobha 9 ukuya kwi-40 yuan / itoni, abathengisi bentsimbi kunye nabangaphakathi kumzi-mveliso bakholelwa ukuba, kuthathelwa ingqalelo amaxabiso epetroli ekrwada kunye nokubuyisela amaxabiso kwikamva, ukuthintelwa kwendalo ekwindla nasebusika ukuqinisa izinto, kulindeleke ukuba ixabiso lilonke lentengiso yentsimbi yaseBeijing Ekupheleni kuka-Okthobha kuya kuvuka ngokuzinzileyo.
Ikhoyili eshushu eqengqelekileyo, ukuhanjiswa kwentsimbi emazantsi kunye neendawo zangaphakathi zeshishini ezifunyenwe emva kophando, ngenxa yemfuno yelori enzima yangoku inyuke kakhulu. Excavator. Ukulahla iilori kunye nezinye iimatshini zokwakha zifuna ukwanda, intengiso eshushu eshushu ethengisa intengiso yekhoyili. Ukuthengiswa kwetraki enzima yase China kwafikelela kwiiyunithi ezili-136,000 ngoSeptemba, ukuya kuma-63 epesenti ngonyaka, idatha ibonakalisile. Iinkcukacha-manani ezivela kuMbutho woShishino loKwakha laseChina zibonisa ukuba ngoSeptemba iinkampani ezingama-25 ezazibandakanyeka kolu phando zathengisa oomatshini bokumbiwa kwedatha abangama-26,034, inyuka ngama-64.8 epesenti ngonyaka. Ngokwale ngqikelelo, ixabiso lentengiso yekhoyili eshushu yakutshanje iya kuba neenkwenkwezi kwimeko yokubaleka eyomeleleyo.
Ngokubhekisele kwipleyiti yekhoyili ebandayo, ukusukela ngoSuku lweSizwe, imveliso kunye nokuthengiswa kwemizi mveliso yezixhobo zasekhaya eChina kuyachuma. Emva koSuku lweSizwe, amashishini asezantsi ngokubanzi anemfuno yokuzaliswa kwakhona, ekhuthaza ukwanda kweemfuno zentsimbi. Iinkcukacha-manani ezivela kuMbutho wase China waBavelisi beZithuthi zibonisa ukuba imakethi yeemoto zabakhweli yafikelela kwiiyunithi ezizizigidi eziyi-1.91 ngoSeptemba, ngokukhula konyaka nge-7.3%, kugcinwa izinga lokukhula lonyaka nonyaka eli-8% kwiinyanga ezintathu zilandelelana. (7.7% unyaka nonyaka ngoJulayi kunye ne-8.9% ngonyaka-ngo-Agasti). Ukusebenza ngokubanzi kwemfuno engezantsi kungcono, kwaye ixabiso leemveliso ezibandayo lixhaswa ngamandla.
Kwipleyiti eshinyeneyo, uSuku lweSizwe emva kwengingqi yeBeijing, iTianjin kunye neHebei kwixabiso lentengiso yeplate yothuko oluphezulu, kulindeleke ukuba lo mkhwa uqhubeke kungekudala.
Abathengisi bensimbi kunye nabangaphakathi kwishishini bakholelwa ukuba intengiso yangoku yentsimbi elungileyo, izinto ezimbi ziyaluka. Kwicala elifanelekileyo, ngo-Septemba, utyalomali lulonke kwiiprojekthi ezinkulu kwilizwe liphela lonyuke nge-96.6% ngenyanga-ngenyanga, emva kokuvela kwentsimbi yoSuku lweSizwe inyuke kakhulu, ixhasa ixabiso lendawo. Njengoko imfuno esezantsi inyuka. Amaxabiso emva kwexesha ngentsimbi asenendawo yokunyuka. Ukusuka kwimbono ye-bearish, uSuku lweLizwe emva kokukhula kwempahla yensimbi, uxinzelelo lwentengiso aluncitshiswanga; Ukuqinisa umgaqo kwicandelo lokuthengiswa kwezindlu; Imveliso yentsimbi yahlala iphezulu; Emva kokungena ekwindla nasebusika, ulwakhiwo kwingingqi esemantla lujongane nezinto ezingathandekiyo njengokuma, okuya kubuyisa umngcipheko wexabiso lesinyithi kwixesha elizayo.
Iindaba ze-China Metallurgical (uHlelo 7, uHlelo 07, Okthobha 20, 2020)